कोरोना नियन्त्रण गर्न नसक्ने तर विप्लव खोज्दै हिड्ने ? – Sthaniya Patra
By स्थानीय पत्र	 Last updated Aug 24, 2020
अहिले देश कोरोनाको चरम महामारीमा छ । सरकारले १३ अर्बको हिशाब कोरोनामा खर्च भएको भन्दै गर्दा कोरोना बढेको मात्र छैन, आईसियु, भेन्टिलेटरमा उपचार नपाएका कारण मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ ।
बेसारपानी, भाईरसको बोसो पगाल्ने जस्ता हावादारी गफ लगाउन र पार्टी भित्र रडाको मच्चाएर बस्न प्रधानमन्त्री व्यस्त छन् । विदेशबाट आउने हरेक नागरिकले रिण काढेर टिकट काटेर विमानस्थलमा पुग्दा समेत सरकारको जहाज रित्तै आउछ नेपाली अलपत्र पारेर । विदेशमा मृत्यु भएका लाशहरु कति ल्याउन सकेको छैन सरकारले । देशभरमा एक हजार समेत आईसियु छैन, ५ सय भेन्टिलेटर छैन तर पनि हिशाब १३ अर्बको देखाईरहेको छ सरकारले । आईसोलेसन नभएर हजारौ कोरोना लागेका मान्छे घरैमा बस्न र मृत्युवरण गर्न समेत बाध्य हुन थालेका छन् ।
बाढी पहिरोको वितण्डा उस्तै छ , हामी बस्न सक्दैनौ जोखिम छ सारीदेउ सरकारले भनेर गुहार लगाउदा नसुन्ने सरकार र तीनमा मन्त्री नेताहरु पहिरोले मान्छे पुरे पछि चामलको बोरो बोकेर फोटो खिचाउदै हेलिकप्टरमा जान्छन् । बाढीले बगाएर मान्छेको बिचल्लि भए पछि रेडक्रसले दिएको सामान्य राहत बाँड्न सेनाको जहाज र हेलिकप्टर चढेर एउटै जिल्लामा मन्त्री र सांसदको लर्को पुग्छ । यो जनताप्रति जवाफ देही भएको भन्न मिल्छ ? कदापी मिल्दैन । यो लोकप्रियता र अर्को चुनाव जीत्न आफू स्थापित भईरहने चालबाजी मात्रै हो ।
देशमा कोरोना नियन्त्रण बाहिर गएको एउटा परिप्रेक्ष्य छ भने बाढी पहिरोको वितण्डा अर्को पाटो । विदेशमा अलपत्र नेपाली, स्वदेशमा रोजीरोटीको अभावमा मानिसले आत्महत्या गरेको डरलाग्दो अर्को चित्र ।
तर सरकार स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा भ्रष्टाचार, बैठक भत्ता खाने, भ्रमणका नाममा जनताले तिरेको करबाट भ्रष्टाचार गर्ने र मोटाउने अकुत कमाउन दलालहरुलाई छुट दिएर वालुवाटार र सिंहदरबारबाट हुकुम जारी गरेर बसेको छ ।
त्यति मात्रै हैन सरकारका लागि कोरोना भन्दा बढी विप्लव बढी चुनौती जस्तो लागेको छ । यत्रो महामारीमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेर उद्धार र स्वयसेंवामा कार्यकर्ता परिचालन गरेको घोषणा गरीसकेको छ ।
देशभर राहत, उद्धार, निर्माण , जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र सेवामा लागिरहेका छन् विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता । तर सरकार किन अत्ता लिएको छ ?
अहिले दिन दिनै विप्लवका कार्यकर्ता खोजी खोजी हिडेर करोडौ स्वाहा पारेको छ । मातिएका नेता कार्यकर्तालाई दर्जनौ झुट्टा मुद्धा लगाएर फसाउदै गएर सरकारले कानुनी राज्य र उसैले जारी गरेको संविधानको पनि उलंघन गरीरहेको छ ।
प्रत्यक्ष युद्ध नभएको स्थितिमा सरकारले गरीरहेको यो दममनकारी हर्कतको अर्थ राज्य या त विदेशी शक्तिको ईशालामा युद्ध निम्त्याउने र युद्धसरदारहरु कमिसन खाने दाउमा छन् । या त आक्रोसित जनताको नेतृत्व विप्लवले गर्ने र सत्ता गुम्ने डर छ हैन भने यो स्थितिमा पनि विप्लवलाई कोरोना नियन्त्रण गर्नु भन्दा धेरै खोजी गर्दै हिड्नुको अर्थ के हो ?
ईन्काउन्टरका नाममा भएका हत्या र यो धरपकड , यातना र दुखः दिने कार्यले कम्युनिष्ट भनिएको सरकार अन्ततः फासीवादी र दलाल सरकारमा परिणत भएको छ ।
हामी, फासिबादी सत्ता धारि दलाल का मतियार भ्रष्टनेताहरु होसियार नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेताकार्यकर्ता लाई गिरफ्तार बाहानामा देशका विभिन्न ठाउँ बाट पार्टी नेताकार्यकर्ता गिरप्तार नभई हत्या गर्ने सम्म पुगेको यो दलाल फासिस्ट सरकार होसियार रहन आव्हान गर्दछौँ ।
सरकारले यदी जबरजस्त युद्ध थोपर्न खोजेको हो भने त्यसको बिरुद्ध शसक्त प्रतिरोध गर्नु हाम्रो अधिकार र कर्तव्य दुबै हो । सीमा फिर्ता ल्याउछु भनेर हल्ला गर्ने र आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन खोज्ने, कहिले एमसीसीका नाममा देशै बुझाउन खोज्ने ओली सरकार स्पष्ट रुपमा दलालहरुको पञ्जाबाट सञ्चालित रहेको कुरामा दुईमत छैन अब ।
यही नालायक सरकारले समाज यसरी चल्दैन, देश बन्दैन वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनु पर्छ, शान्ति र समृद्धिको नयाँ पहल चाल्नु पर्छ । सही कम्युनिष्ट, देशभक्त, प्रगतिशील शक्तिहरुको हातमा देश आउनु पर्छ भनेका भरमा उ माथि दमन गर्ने भने पछि सरकारको नियत स्पष्ट हुदैन र ? भ्रष्टाचार, वन विनाश, कमिसन आन सत्ताधारी कम्युनिष्टहरु हसिया हथौडाको ट्रेडमार्क भित्र राजनीतिक व्यापार गरेर मालामाल भईरहेका छन् अनि जनता भोकभोकै ?
अनि भ्रष्टाचार, कमिसन, दलाल तन्त्रको बिरोधमा जनक्रान्तिको कुरा गर्नेहरुलाई दमन ? प्रतिवन्ध हत्या ? युवाहरुलाई खाडीमा हैन देशमै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ, उनीहरुलाई यही रोजगारी दिनु पर्छ ,देशको अर्थतन्त्र र उत्पादन समान वितरण हुनु पर्छ भन्नेलाई जेल नेल यातना ? कस्तो कम्युनिष्ट हो केपी प्रचण्ड वादलहरु ? हो हामीलाई रहर छैन फेरी पनि युद्ध लड्ने । तर यदी दलाल सरकार निरन्तर युद्धको निम्तो दिदै दमनमा आईरहन्छ भने के विकल्प हुन्छ ?
हामी अहिले पनि जनताको सेवामा, जनश्रममा जनतासगँ छौ । तर हामीमाथिको यो दमनको श्रृखला नरोकिएमा अबको विकल्प भनेको जनताको आम समर्थनमा हुने प्रतिरोध युद्ध हो । नाँगिंदै गएको सरकारलाई अझ जनतामा छर्लगं बनाउने र उनीहरुको सत्ताको उन्मादलाई अन्त्य गर्ने र जनताको स्वतन्त्र पहलकदमीमा नयाँ व्यवस्थाको निर्माण हुने स्थितिमा जानु अबको बिकल्प हो जसको नेतृत्व विप्लवले गर्ने छन् ।
हामीलाई प्रतिवन्ध, दमन र हत्या, जेल नेलले निश्चित समय घुमाउरो बाटो तय गर्नु पर्ला यसले फरक पार्ने छैन । तर दलालहरु तिमीहरुको स्वर्णयुग हामी भत्काएर छाड्ने छौ । तिम्रो स्वर्गमा धावा बोल्ने छन् जनताले । आम नेपाली जनतालाई सधै मुर्ख र भ्रमित बनाउन सक्दैनौ । अब समय आउदै छ जनताले दलाल सत्तालाई फ्याक्ने जसको निम्ती एकीकृत जनक्रान्ति शक्तिशाली मार्गदशक बन्ने छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट फालिने डरले संसद् विघटन गरे :…
उद्यमशीलता : आजको आवश्यकता
ओलीलाई हटाउन कांग्रेस अघि सरे जसपाले सघाउँछ : उपेन्द्र यादव